नयाँ कोभिड -१ ant एन्टिबडी परीक्षण एक मात्र एक पटक हरेक months महिना खेल परिवर्तन आवश्यक छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकिंग यात्रा समाचार » नयाँ कोभिड -१ ant एन्टिबडी परीक्षण एक मात्र एक पटक हरेक months महिना खेल परिवर्तन आवश्यक छ
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • साक्षात्कार • LGBTQ • समाचार • मान्छे • पुनर्निर्माण • प्रविधि • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
Epitome जोखिम, जोखिम व्यवस्थापन, COVID- अनुपालन उपायहरु, र सुरक्षा समर्थन मा एक नेता, घोषणा गरे कि लीसा विल्सन छिटो बढ्दो कम्पनी को सीईओ नामित गरिएको छ।
यो खोप लगाईएको र खोप नलागेका मानिसहरु को लागी बनाइएको नयाँ COVID परीक्षण को एक नयाँ मानक को शुरुवात हुन सक्छ। परीक्षण तपाइँको शरीर भाइरस लाई समात्न को लागी प्रतिरोधी छ भनेर देखाउनेछ। यदि तपाइँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, यसले तपाइँलाई बताउनेछ कि तपाइँको शरीर कोभिड १ fight संग लड्न कती राम्रो छ। यो परीक्षण मात्र प्रत्येक 19 महिनामा एक पटक आवश्यक छ। यो एक खेल परिवर्तक र एक जीवन रक्षक मानिन्छ।
गत वर्ष, Epitome जोखिम को डाक्टरहरु, वैज्ञानिकहरु, शोधकर्ताहरु, र साझेदारहरुको टीमले थाहा पायो कि एंटीबॉडीलाई तटस्थ पार्नु भनेको मानिसहरुलाई COVID बाट बचाउनु हो।
Epitome जोखिम टीम एक परीक्षण छ कि तपाइँ घर बाट कि तपाइँ 24-48 घण्टा मा तपाइँको तटस्थ एंटीबॉडी स्तर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ बाट विकसित गर्न सक्नुहुन्छ।
Epitome एक अमेरिका आधारित जोखिम व्यवस्थापन कम्पनी हो, COVID-19 अनुपालन र सुरक्षा समर्थन मा विशेषज्ञता। यो एंटीबॉडी परीक्षण neutralizing को अग्रणी प्रदायक हो।
लिसा विल्सन, Epitome जोखिम टीम को सीईओ, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा आधारित छ।
लिसा विल्सन आज एक अतिथि थिए ताजा समाचार शो, को साथ सहयोग मा उत्पादन विश्व पर्यटन नेटवर्क.
Epitome जोखिम को टीम एक परीक्षण हो कि एक व्यक्ति लाई थाहा दिईन्छ उसको 24-48 घण्टा मा उसको वा उनको तटस्थ एंटीबॉडी स्तर थाहा हुनेछ। यस्तो परिक्षण को नतिजा महीनाहरु को लागी गरे पछि राम्रो हुन्छ र यो स्पष्ट संकेत दिन्छ कि यो एक व्यक्ति को लागी कोभिड -१ catch लाई समात्न वा फैलाउन को लागी कती जोखिम छ।
अमेरिकाले हिजो, अगस्ट १,, २०२१ मा एउटा अध्ययन जारी गर्‍यो, त्यो भ्याक्सिन सुरक्षा, वा तपाइँले तपाइँको खोप लगाए पछि तपाइँको शरीरले उत्पादन गरेको न्यूट्रलाइजिंग एन्टिबडी, केहि महिना पछि घट्छ।
प्रत्येक व्यक्तिको तटस्थ एंटीबॉडी स्तर एक फरक दर मा बूँदें, किनकि सबै फरक छ। एन्टिबडी लेभल को तटस्थीकरण कुनै पनी खोप तपाइँले पाउनुभयो ड्रप। यो महत्त्वपूर्ण छ कि मानिसहरु को लागी आफ्नो तटस्थ एंटीबॉडी जान्न को लागी।
सबै एन्टिबडी परीक्षणहरु तपाइँ एकै जानकारी संग प्रदान गर्दैनन्। Epitome जोखिम को तटस्थ एंटीबॉडी परीक्षण बजार मा मात्र एफडीए EUA परीक्षण हो कि तपाइँको सुरक्षा को स्तर को विस्तार हुनेछ।
"चाहे तपाइँ एक घर मा परीक्षण वा अर्को एन्टिबडी परीक्षण लिनुहुन्छ, तपाइँ पक्का गर्नु पर्छ कि तपाइँको परीक्षण तटस्थता मापन छ," लिसाले भनिन्।
Epitome जोखिम जोखिम व्यवस्थापन सेवाहरु प्रदान गर्दछ, COVID जोखिम व्यवस्थापन सहित मानिसहरु, व्यवसायहरु, चलचित्र निर्माणहरु, खेलकुद घटनाहरु, र विश्व भर मा अन्य जमघटहरु लाई।
Epitome जोखिम को एक सदस्य बन्ने प्रक्रिया मा छ विश्व पर्यटन नेटवर्क र एक नयाँ COVID-19 परीक्षण ब्याज समूह को नेतृत्व गर्दछ।
आजको ब्रेकि news समाचार प्रस्तुति सुन्नुहोस्।
डायना Nighswonger भन्छन्:
मँ यो टेस्ट किट को लागी कहाँ पठाउँछु र यसको लागत कति हुन्छ?
अन्दाज गर्नुहोस्…। गत वर्षको डिसेम्बरमा कोभिड भएको थियो। यो लगभग सेप्टेम्बर हो र मेरो एन्टिबडी 1.92 % हो…। ओह र मैले "खोप" पाएको छैन